Jonga imifanekiso yesathelayithi kwaye ucaphule uhlalutyo usebenzisa uMjongi womhlaba-iGeofumadas
Ikhaya/Geospatial - GIS/Hlola imifanekiso ye-satellite kunye nokuhlalutya ukuhlalutya usebenzisa i-Landviewer
Hlola imifanekiso ye-satellite kunye nokuhlalutya ukuhlalutya usebenzisa i-Landviewer
Xa kuziwa ekufuneni idatha ethile (i-AOI-Indawo yomdla) yolwazi oluvela kwii-sensors ezikude, i-EOS-Inkqubo yokujonga uMhlaba yenye yeendawo ezisetyenziswayo kwiwebhu; zombini ukukhangela, ukukhetha nokukhuphela imifanekiso kumaqonga esathelayithi. Eli qonga kutshanje lidibanise izixhobo zokukhupha idatha, ezifanelekileyo ukuthetha ngazo.
Olona ujongano oluphambili loMbukeli weLizwe luqulunqwe yiphaneli esecaleni esekhohlo, ebonisa zonke iimveliso zento nganye yesenzi, ezihambelana ne-AOI, isixhobo kwindawo yomgca osekhohlo, oqulethe imisebenzi efana: nokuzoba i-AOI (uxande, polygonal, okanye isangqa), umlinganiselo, chonga ufakelo, uluhlu lweempawu, ulwabiwo, uhlalutyo lwexesha lokujonga kunye nokujonga kwe-3D. Kwindawo esezantsi sisikali, iindawo ezilungelelaniswa nendawo.
Ngaphambili, kwibhokisi yendawo, indawo yomdla ibibekwe kuyo kwaye yonke imifanekiso enxulumene nelo nqaku ibonakalisiwe, ngoku xa ufuna indawo eyimfuneko, i-AOI yakhiwa ngokuzenzekelayo emveni koko ivumela ukufikelela kwilayibrari yemveliso. Ukongeza, kuya kufuneka kuthathelwe ingqalelo ukuba ngaphambi kokuba ubone, ukhangele, ukhethe kwaye ukhuphele nayiphi na imeko, kufuneka ubhalise kwiphepha ngaphambi kokuba wenze nayiphi na inkqubo, kuba xa ubhalisa ukufaka ixesha lolingo lweentsuku ze-15 kunye Abo bafumana ezi zibonelelo:
Ukukhangela okuguquguqukayo, ukhetho olubanzi lwemifanekiso ephantsi, ephakathi kunye nephakamileyo, ukusetyenziswa okungenamda nokudibanisa kunye nokudibanisa, ukudalwa kwezalathiso zobuntu, ukufikelela kwiinkcukacha zembali, iindawo ezininzi ezinomdla, kunye ne-WMS yokungenisa idatha kuyo nayiphi na i-GIS.
Iqonga -eyayikade isimahla-Inezibonelelo ezibanzi nezintsha. Ngaphambi kokuba ukhuphele ubuncinci iimveliso ze-satellite ezili-10 kweli phepha, ngaphandle kwezithintelo; ngoku, ngohlaziyo olutsha, ikhethekileyo ngakumbi.
Ukugqitywa kolwakhiwo lwe-AOI, onke amabala anxulumene nale ndawo aboniswa ngokuzenzekelayo. Iphaneli yasekhohlo iya kubonisa onke amaqonga aqukethe idatha kuloo ndawo, kamva inokuhluzwa, ngokwenjongo yesifundo. Amaqonga e-satellite apho iimveliso zinokuthi zikhethwe zezi: Sentinel-2L1C + 2A, Landsat 8 OLI + TIRS, Landsat 7 ETM +, Landsat 4-5 TM, CBERS-4 MUX, CBERS .4ERS I-4 -PAN5 kunye ne-NAIP.
Uncedo lokusebenzisa i-AOI kukuba iqonga alizukubonisa iziphumo ezingangqinelaniyo okanye ezingagubungeliyo indawo ekujoliswe kuyo, konke ukuguqulwa kwephepha kwenzelwe ukuba indawo yomdla igutyungelwe ngokupheleleyo yimveliso yesatellite yoluvo olukhethiweyo. Oku kubaluleke kakhulu, kuba kwamanye amaqonga okhuphelo anje nge-USGS, okanye iAlaska SAR Facility, avumela inqaku ukuba libekho, kodwa abaqinisekisi ukuba inqaku elo ligutyungelwe ngumfanekiso ngokupheleleyo. Oku kunceda ukunciphisa ixesha elichithwe ukukhangela kunye nokukhetha iimveliso, kwaye umhlalutyi unokuchitha ixesha elininzi ngaphambi okanye emva kokuqhubekeka.
Xa usebenza ne-AOI, awuzukunikwa okanye uboniswe namphi na umfanekiso otyhidiweyo ongahambelani okanye ugubungele ngokuthe ngqo indawo ekhethiweyo.
Ezinye iintlobo zokucoca zinokusetyenziswa njengombhalo wemifanekiso, oko kukuthi, ukuba zizinzwa zobusuku bokubakho, izinzwa ezisezantsi zesigqibo esisebenzayo, izinzwa ezisebenzayo, idatha yendawo, idatha yefayile ye-EOS, kunye nemifanekiso ephezulu yokusombulula . Olunye uhlaziyo olunomdla kakhulu kwiphepha kukuba banceda umphandi ukuba achonge ukuba zeziphi iintsuku ezinemveliso ezinxulumene ne-AOI yakhe, umhla wokuqalisa kunye nokuphela wawubekwe ngaphambili kwaye zonke iindawo ezihambelanayo zaboniswa.
Xa ucofa kwikhalenda, ungayibona imihla ebalaseliswe ngombala oluhlaza okwesibhakabhaka, eyenzeka xa kukho iindawo ezifumanekayo, kwaye akufuneki ukhangele ezinye iintsuku, kodwa, ngamanqaku aluhlaza, unokuqiniseka ukuba zeziphi iintsuku ezinemifanekiso.
Njengoko iqonga liqukethe imifanekiso yokukhanya kwaye ezi ziqwalasele ngakumbi izinto zemozulu ezinje ngokufiswa lilifu, kukho necebo lokucoca ulwelo olulahla imifanekiso enefesenti ephezulu yokugcwala kwamafu. Ukongeza, kunokwenzeka ukuba ubhalise ukuze ufumane izaziso malunga nezigcawu ezitsha ezinxulumene ne-AOI, okanye ukuba ngaba olunye uphando olwenziweyo lwenziwe wedwa, inkqubo okanye ukhumbula kwaye luya kuthumela izaziso zokufumaneka kwemveliso.
Isicelo sigcina zonke ii-AOIs, ezenziweyo, ekuhambeni kwexesha, zinokukhutshelwa, kunye nesinye sezixhobo ezongeziweyo, ukukhutshwa kwe-AOI ukuyila ifomathi okanye ukucinywa njengoko kufuneka. Ngokumalunga nokusetyenziswa kwezalathiso, ngaphambi kohlaziyo, imiboniso inokujongwa, kunye nezalathiso ezisetyenzisiweyo ezinje nge-NDVI okanye i-NDWI, ngoku bongeze ezinye izalathiso, ezinje ngeSAVI, ARVI, EVI, SIPI okanye GCI Grassland Clorophile Index.
Umsebenzisi, kuxhomekeka kwiinjongo zesifundo, unokutshintsha ii-index, ezinike igama abazithathela ingqalelo, bakhethe iphalethi yombala emele kakhulu isifundo sabo -okanye wenze entsha-izuze izibonelelo ezininzi, ukudibanisa umsebenzisi kwiinkqubo ngendlela elula.
Elinye isixhobo esonwabisayo luhlalutyo, ekuvumela ukuba uqaphele amaxesha apho bekukho iziboniso ngaphambili, kwaye uyabona ukuba i-AOI ekhethiweyo ngaphambili ivele njani. Unokwenza ukubonwa phakathi kweziganeko eziqhelekileyo, okanye ii-indexes ezibonelelwe liqonga. Umda wexesha unokuhamba ukusuka kwi-1 ukuya kwiinyanga ze-6, okanye ukusuka kwi-1 unyaka ukuya kwi-10 iminyaka, ukuba ixesha elithile liyafuneka, linokubekwa kwakhona.
Kweli nqanaba litsha loMbono weLizwe, kunokwenzeka ukuba baguqule imifanekiso ngokubonakalayo, kuba kuyaziwa ukuba ngenxa yesibhakabhaka okanye ezinye izinto banokubonakala bukhanya kakhulu okanye bumnyama kakhulu, ngoko ke ukusebenza kongqinisiso kuyongeziwe wolula, ukulungelelanisa i-histogram, kwezo ntaba zimnyama okanye eziphakamileyo ukukhanya.
Kukho iinketho ezikhawulezayo ze-4 zokutshintsha umfanekiso:
Ukuthoba i-histogram yendawo,
Yolula i-histogram yokuseta idatha,
icandelo lasekhaya lokusika
Ukusikwa kweCulinary (ukusilela).
Ukongeza oku kungentla, unga:
Yongeza iileya kwiziphakeli ze-WMS, iindawo ezinokukhutshwa zinokukhutshelwa, ngokusikwa kwe-AOI, ebekwe ngebhokisi yokukhangela (1) okanye imveliso iyonke, imilinganiselo yendawo ilula kakhulu, unako fikelela kuludwe lwezinto ezisetyenzisiweyo kuyo yonke inkqubo yokungena kweqonga (ukusuka kwimephu esisiseko, ngokusebenzisa umhlaba we-MDT, ukuya kumfanekiso wokugqibela osetyenzisiweyo).
Bazisa ukuba kungenzeka ukuba babelane ngendawo kunxibelelwano lwentlalo, njenge-twitter, i-LinkedIn, i-Facebook, okanye ikhonkco (i-2). Ngokunjalo, ukuba kukho nakuphi na ukuphazamiseka kwiqonga, iqela lenkxaso linxibelelana kwiqhosha elisezantsi kwesokunxele kwesikrini (3).
Kubalulekile ukuba ubone ukuba izixhobo ezinje ngezi zinceda njani ukuphucula kunye nokwenza lula ukuqhubekiswa kwedatha, kunye nolwakhiwo lohlalutyo lomhlaba. Le teknoloji isekwe kwidatha esefini, inani elikhulu leemveliso linokugcinwa kwilifu le-EOS kwaye lifikeleleke nakweyiphi na ikhompyuter, into ekukuphela kwayo ekufuneka ithathelwe ingqalelo kukuba ayiseyiyo iqonga lasimahla, kufanelekile kufanelekile ukuhlawula iinkonzo ezinikezelwayo. Siza kubona kungekudala ukuba olu hlobo lwezixhobo luya kuthi ngokuchaseneyo okanye lutshintshe ngokupheleleyo usetyenziso lwe-GIS kunye nePDI (Digital Image Processing), esele zisetyenziswa kumaxesha amva njenge-ERDAS imagine okanye i-ENVI.
Ukungena, ubhalise kwaye ufumane iimini ze-15 zovavanyo, yiya kwikhonkco elilandelayo: Umbono womhlaba-EOS.
Inkqubo yobungcali kubuNjineli boLwakhiwo kunye ne-ETABS